Xa ufaka intle HD ezifana KLAX, kubonakala eyoyikekayo
umbuzo Xa ufaka intle HD ezifana KLAX, kubonakala eyoyikekayo
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #595 by svanarsdel
Xa ukufaka ubuhle photoreal ibukeka kubi ukuba engagqibekanga. Yintoni endiyenzayo mna engalunganga.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #605 by archangelmj12
Kukho izizathu ezimbalwa zeziphumo. Okokuqala ngumgangatho wemifanekiso, kunye nohlobo. Okwesibini, ikhompyutha yakho kufuneka ukwazi ukujongana nomthwalo wemifanekiso kunye nezinye iinkonzo zokunciphisa. Njengoko ufanele ukwazi ukuba i-MSFS yinkqubo yamandla enamandla kunayo yonke eyakhayo yendiza, kwaye nangona iprogram yokuqala yayiyi-dunk, into yokuba uBill Gates wavula amalungelo kwiprogram ye-2007 kunoma ubani okhethiweyo ukuba asebenze. Ngaphandle kwe-STEAM ngamakhulu amawaka okulandwayo unako ukudala i-youre yakho yendawo yonke. Ukuthetha ngokunyanisekileyo, kukho abadali abaninzi abangaphantsi kweminyaka yobudala be-20 kule nkqubo kwaye inyaniso ibona ingcono kwaye imibono engcono yeyiphi indiza iphela, ngaphezu kwe-ACE iqela elikhulu elibandakanyekayo kwinkqubo ye-MSFS. Ngoku ukuba ufuna into enokukugcina iminyaka yokuzama ukuqonda inkqubo kunye nokuyenza ihambe kakuhle, kukho imveliso emibini oyifunayo. Iyokuqala i-fs tweak ye-fps. Esi sixhobo esiyingqayizivele kwaye esiphawulekayo, esilula ukuyisebenzisa kwaye siya kukufundisa into ongaziyo nendlela yokuqonda inkqubo. Okwesibini yi-FSPS XTREME. Oku kuya kunqumla iisokisi zakho. Ndisebenzisa i-500 ye-7 ubudala ye-laptop ye-Toshiba.intel yengundoqo i5.i ibe neenqwelo ze-3850, ii-459 iintlobo zokongeza kunye kunye neenqwelo zeenqwelo-moya ze-45000 eziqhuba iishedyuli zee-lifelife, kwaye zineziqulatho. Iyakuthatha isondele kwiminyaka elishumi kulo nyaka ukwenzela ukuba ifikelele kwaye ihambe kwiikhomputha ze-5 kunye ne-15 reinstalls kunye nokucima izikrini ezimnyama, kwaye ndifumene ikopi yeskripthi kwenkqubo evela kwi-Microsoft. Ndafunda kwi-2007 kwi-microsoft ukuba kwakuya kubakho iiphoso kunye neziphambeko, kodwa nanamhlanje uluntu luya kusinda esiye sithatha inqubo ephakamileyo. Ndiyathemba ukuba oku kuye kunceda, nayiphi na imibuzo, ushiye umyalezo apha kwaye ugula ubuyele kuwe. Iimpawu ezininzi zezorhwebo, kwaye ngokukhawuleza uya kufunda. Ngaphandle koko, yakho kwindawo efanelekileyo kakhulu apha, ngoko ukwenza kwakho kuhle. Iingxaki ngeay? Nantoni na, ndixelele. I-MSFS yangaphambili. Ukuba andifumaneki ndiza kuyifumana.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #613 by rikoooo
Ndiyabulela i-archangelmj12 yakho impendulo enkulu.
Svanarsdel, siya kuba nokukulungele ukukunceda ukuba ungasithumela ezinye izikrini, ngoko sinokukuxelela into engalunganga.
Ixesha ukwenza page: 0.309 imizuzwana